Global Voices teny Malagasy · Oktobra 2019
Tantara tamin'ny Oktobra, 2019
Mbola any am-ponja ilay mpanao gazety Nizeriana Omoyele Sowore noho ny fiampangana namboamboarina tamin'ny famadihana tanindrazana sy ny fanevatevana ny filoham-pirenena
Afrika Mainty31 Oktobra 2019
Mahita ny fitazonana mitohy an'i Omoyele Sowore sy ny fiampangana hanenjehana azy ho fanamelohana tsotra fotsiny ny mpanohitra ara-politika any Nizeria ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona.
Mety hipoaka ao Trinite ny volokanom-potaka: efa niomana ve ny mponina?
Karaiba30 Oktobra 2019
Ao Trinite afovoany, vao haingana ny fotaka volkano Piparo no nampiseho famantarana hetsika mitombo, ampy hampisy fivakisana eny amin'ny arabe akaiky. Nisy trano iray manokana niharan'ny fahasimbana ara-drafitra ary nitatitra ireo mponina ao Piparo fa nandre feo mafy sy setroka maimbo solfara amin'ny rivotra.
‘Abominable’ filma navoakan'ny DreamWorks voarara any Vietnam, Malayzia, ary ny Filipina noho ny famoahana ilay fari-dranomasina ifandirana lazain'i Shina ho azy
Azia Atsinanana29 Oktobra 2019
"Mila mifampiresaka amin-dry zareo isika ary olona maraintsaina ireo... Mba diso lalana fotsiny ry zareo."
Oseania29 Oktobra 2019
Ametraham-panontaniana indray ny zo hitantara : Kiobàna mpanao gazety, iharan'ny tsindry ataon'ny mpitondra
Amerika Latina27 Oktobra 2019
Periodismo de Barrio no mtantara ireo fomba nisamborana ireo roa mpanao gazety avy ao aminy noho izy ireo nanatanteraka ny asany
Eoropa Afovoany & Atsinanana27 Oktobra 2019
(2010) Mielipatrana ny fiantraikan'ny daroka baomba tanaty metro vao haingana. Misaona ireo niharam-boina ny vahoaka, mitady valiny amin'ireo fanontaniana maro, mandinika ny ho avin'i Rosia ary maneho fahatezerana amin'ireo ... mpamily fiarakaretsaka sy mpisoloky amin'ny hafatra an-tsoratra izay toa manararaotra ny voina.
Azia Atsimo26 Oktobra 2019
Manatevin-daharana ny Fitokonana ho an'ny Toetr'andro ny tanora any Japana
Azia Atsinanana26 Oktobra 2019
Manomboka mandray andraikitra ny vahoaka Japoney. Tanora Japoney mpanao fihetsiketsehana 2 500 teo ho eo no nanao diabe niainga tao amin'ny Oniversiten'ny Firenena Mikambana ao amin'ny lalana Omotesando ao Tokyo ho any amin'ny toerana fiampitana malaza Shibuya, miantsoantso teny filamatra manoloana ireo mpandeha an-tongotra mitazana ary hita mazava fa gaga.
Rosia: Hazo Noely adala ao Vladivostok
Eoropa Afovoany & Atsinanana26 Oktobra 2019
Tsy afaka mihitsy amin'ny vazivaziny izay manakana azy ireo amin'ny fahaketrahana maharitra ireo mponin'i Vladivostok, tanàna seranan-tsambo Rosiana lehibe indrindra any amin'ny Ranomasimbe Pasifika. Mihomehy amin'ny zava-drehetra izy ireo, na izany fitohanana mahatsiravina, na filatsahan'ny ranomandry manaitra, ny ravaky ny hazo noely na hetra vaovao amin'ireo fiara Japoney nafarana.
Tanora mpikatroka Tanzaniana manana vinam-panabeazana mampiaty
Afrika Mainty25 Oktobra 2019
Nahita ny fanadihadiana vao haingana notontosain'ny HakiElimu, fikambanana Tanzaniana tsy mitady tombontsoa fa na dia any am-pianarana izay heverina ho "iarahan'ny rehetra" aza, dia mbola tsy namana kokoa ho an'ny mpianatra manan-kilema ara-pahitana ny tontolo fianarana. Vitsy ny sekoly misy ao Tanzania natokana indrindra ho an'ny olona manana kilema isan-karazany.